Max Energy | Environmental
Tree Plantation at School (June 2019)
We, Max Energy, always trying to createaculture and showabeautiful behavior to our next generation. Creating and shapingaculture is not easy, is not fast and we definitely need the ample patience. By our own commitment, we plantaculture into the next generation to create the culture we want.
Trash Cleaning (June 2018)
Max Energy Co., Ltdသည် Max Myanmar Holding Co.,Ltdမှ ချမှတ်ထားသော CSR မူဝါဒများအရ လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုထားသည့်အတိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ UNGC အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့် UNGCမှချမှတ်ထားသော မူဝါဒ(၁၀)ချက်အရ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း နှစ်စဉ် အမှိုက်ကောက်ခြင်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ 2018 ဂျွန်လတွင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်သန့် ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဆီဆိုင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမှိုက်ကောက်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအား (30.6.2018)ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီ မှ ၅နာရီ အတွင်းတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Tree Planting Activity (July 29, 2017)
Trash Cleaning (June 2017)
Max Energy Co., Ltdသည် Max Myanmar Holding Co.,Ltdမှ ချမှတ်ထားသော CSR မူဝါဒများအရ လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုထားသည့်အတိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ UNGC အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့် UNGCမှချမှတ်ထားသော မူဝါဒ(၁၀)ချက်အရ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း နှစ်စဉ် အမှိုက်ကောက်ခြင်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ 2017 ဂျွန်လတွင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်သန့် ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဆီဆိုင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမှိုက်ကောက်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုအား (30.6.2017)ရက်နေ့ ညနေ ၃နာရီ မှ ၅နာရီ အတွင်းတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Annual Tree Planting Event (July 2016)
Max Energy ၏ နှစ်စဉ်ကျင်းပလျှက်ရှိသော မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကို ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့ (၉.၇.၂၀၁၆) ရက်နေ့က လှော်ကား ရေဝေရေလဲတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Max Energy မှ Executive Director ဦးကျော်ဇေမြင့်၊ Director ဦးဆန်းလင်းဝင်း တို့နှင့်အတူ ဝန်ထမ်း ၁၉၀ ခန့် တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ကျွန်းနှင့် မဟော်ဂနီ စုစုပေါင်း ၁၀၈၀၀ ခန့် စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်။
Max Energy's Annual tree planting events (July 2016)
Max Energy Co., Ltd. ဝန်ထမ်းမိသားစုအနေဖြင့် (၂၀၁၃) ခုနစ်မှ (၂၀၁၆) ခုနစ်အထိ မိုးရာသီ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးမှုအား လှော်ကားရေဝေရေလဲဒေသ တွင် နှစ်စဉ် ဧက (၂၀) စီ စိုက်ပျိုးပေးလျှက်ရှိပြီး ရှင်သန်မှုနှုန်း အနေဖြင့် ပျမ်းမျှ (၇၅%) ခန့်ရှိပါသည်။ဖြစ်ထွန်းမှုမရှိသည့် အပင်များအတွက်လည်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ (ပန်းဥယျာဉ်နှင့် အားကစားကွင်းများဌာန) ၏ အကူအညီရယူပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် အစားထိုးစိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးပေးခဲ့သော အပင်များမှာ – ကျွန်း၊ မဟော်ဂနီ၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ရှားပင်၊ မယ်ဇလီ၊ သစ်စိမ့်၊ တည်ပင် နှင့် ခရေ စသည့်နှစ်ရှည်ပင်များ စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခန်းအနားကို ၂.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့က လှော်ကား ရေဝေရေလဲတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း အခန်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုး အပါအဝင် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး Ayeyarwady Foundation နှင့် Max Myanmar Holding မှ M.D ဦးမိုးအောင်ချောနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ Max Energy Co., Ltd. မှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါသည်။
ပွဲတွင် Max Energy မှ စိုက်ပျိုးမြေ ဧက ၂၀ အတွက် ကျွန်းပင် ၅၄၀၀ နှင့် မဟော်ဂနီ ၅၄၀၀၊ စုစုပေါင်း ၁၀၈၀၀ ခန့် စိုက်ပျိုးပေးခဲ့ပါသည်။
Max Energy's Trash Cleaning Activity (January 2016)
On January 4, 2016, Max Energy together with other organizations like Kan Thaw Lat, Green & Clean Team and PS Business School, carried outatrash cleaning activity. We assembledasmall team for that matter and on January 4, our Independence Day, we rendezvoused with other teams and then clean the trash in the streets from Hleden Centre to Sein Gay Har Supermarket. Then the teams split into two groups and continued cleaning in U Tun Lin Chan Street and then finished the activity when we arrived at the end of Innya Lake on Pyay Road. The purpose and our goal of cleaning trash does not mean that such charity groups will do the cleaning for citizens but asasymbol andareminder to reduce careless littering in the streets. Max Energy will continue working at best to support the developing of our country.
Max Energy's Annual Tree Planting Event (July 2015)
As part of the green environment movement, Max Energy has been planting thousands of trees annually. For this year of 2015, we planted around 1200 plants of various kinds in Hlawgar region on 29th of July, 2015.